☺ ငြိမ်းဇေဦး : 01/01/2008 - 02/01/2008
လူညာကြီး ရဲ့ စိတ္တဇ
ဒင်းနဲ့မှ ချစ်တတ်လာပြီ
ညာလိုက်ရတာ အခါ ခါ ...
တခါသုံး ဆေးမြီးတို ဖြစ်ဖြစ်သွားသတဲ့.....
တာတေ ကို လန် ရော ....
တရားဟော ဓမ္မ ကထိက လို
တခါတခါလဲ ဓါးပြ တကောင်လို
နှာခေါင်းဖော် သေပြ ချင်လောက်တဲ့ မေတ္တာနဲ့
ဘယ်နှစ်ကြိမ်ညာ ခဲ့မိတယ် ဆိုတာ
ကာကူလိတ်တာကြီး မီးလောင်ပြင် ဖြစ်သွားနိုင်ရဲ့...။။
တူ..နယ် တဲ့..နယ် နဲ့
အချောင်သမားတဦးရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ဝေဖန်ရေး
သမုတိ လောက ကို
အခု အထိသဘောမကျ ပေမယ့်
အနုပဋိလောမနဲ့လဲ ဖြေတတ်ခဲ့ပြီ....။
ပင်လယ်ကြီး က ခြားသေး
နင့် ရင်ခုန်သံလေး ဆိုနာနဲ့ဖမ်း
အိပ်လို့ ကိုမရဘူး ဟဲ့ ..။
အမေ ဟာ ...
ငါက စကားတွေ မချိုတော့
တအား ပိုချစ်လို့ 
အလကား ငို မပစ်ဖို့
မိုးပြာရောင် ကောင်းကင် ကို
တကြောင်းပန်းချီ တွေ ထပ်နေတဲ့
ငါ့အာရုံကို ငါးတကောင်လို မျှား
စာပို့ ခိုလေးတကောင်လို မင်းဆီစေလွှတ်
ကမ္ဘာ့ဆွဲအားနဲ့ မှားယွင်း
မင်း အိပ်မယ်ဆို ချော့သိပ်ဖို့ ...။
စိတ်ချ ဘေဘီလေး ...
ဘယ်တော့မှ ငါ့ ဒဏ်ရာနဲ့
မင်းကို ညစ်ထေးစေမယ့်သူ မဟုတ်ဘူး။
ချောင်းပေါက်အောင် အာနာပါန ကမ္မဌာန်းနဲ့
မင်းကို ကိုးကွယ်ရင်း တိတ်တိတ်လွမ်းမယ်..။
ဘော် ၊ ဒန် ၊သံ၊ရွှေ နဲ့
ဘာဝနာနဲ့ မှား မှားနေတတ်တော့
နေကွယ်ရင် တိတ်တိတ် လွမ်းပေမယ့်
လက်ပွန်းတတီး အလွမ်းတွေနဲ့
ငါ လန်ဒန် သိမ်းမြစ်ဘေးမှာ
ပါရီက အီဖယ် မျှော်စင်မှာ
နယူးယောက်မှာ လမ်းအတူလျှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး ......။
မြွေသားအရက်နဲ့ မင်းရဲ့ရှက်ပြုံးကို
စရိတ်ငြိမ်း စိတ်ထိမ်းဖို့ ပြောရင်း
သခင်..သခင်လို့ ဘယ်နှစ်ခါ ခေါ်ခဲ့ရတာ
ဒါနဲ့ ... တစ်တီတူးကို
စူး ချွန်နဲ့ ...
ရာဘင်ဒြာ နတ် တဂိုး
ဘယ်လောက် မှုတ်ထုတ်ဖြစ်တယ် ဆိုတာ
ဘယ်သူက တောက်တဲ့လို့ ခေါ်ခဲ့တာလဲ...။
အဆိုတော်ဂျက်မြသောင်း၏ ဒါလေးများ …ဒါလေးများ .. ဟူသော အော်သံသည် ဆောင်းဘောက်စ်ကြီးနှစ်လုံး မှ ဟိန်း ညံထွက်နေသည်မှာ လမ်းမပေါ်ထိ။
လမ်းနှင့်အနီးဆုံးစားပွဲတွင် ခွေးခြေခုံပုလေးများဖြင့် ကျနော်တို့ ခြောက်ယောက် ထုံးစံအတိုင်း ကျပ်ကျပ် သပ်သပ်
သီချင်းနားထောင်သည့်သူက ထောင် ၊ ညာဘက်လက်ဖျံ ကို ဂစ်တာလို ဘယ်လက်ဖြင့် ကိုင်ကာ
တကိုယ်လုံးယိမ်းထိုးလျှက် အံကြိတ်ကာ ဂစ်တာလက်ကွက် လိုက်ရွှေ့နေသောသူက မျက်စိစုံမှိတ်ရွှေ့…။
ဆေးပေါ့လိပ် ကိုက်ရင်း ကျနော်က ရေနွေးကြမ်းခွက်ကို ထပ်ဖြည့်နေ၏။
တယောက်ကတော့ စီးကရက်ဘူး ခွံ ခဲပတ်စက္ကူလေးပေါ်တွင် ဘောပင်လေးဖြင့် ကဗျာ ရေးနေရင်း
ရည်းစားစာရေးနေသော သူကို အကြံပေးနေ၏။
ထိုလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးသည် တမြို့လုံးတွင် အစည်ကားဆုံးဖြစ်၏။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးရှေ့တွင် ဗာဒံပင်တပင်ရှိ၏ ..။ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် ကွမ်းယာဆိုင်တစ်ဆိုင်ရှိ၏ ၊
ညာဖက်ခြမ်းတွင် ကောင်မလေးလှလှလေးတွေအမြဲလာ တတ်သော စက်ချုပ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ရှိ၏။
အဘယ်အကြောင်းကြောင့်မသိ ..။ ထိုစက်ချုပ်ဆိုင်ကလေးကလဲ လူစည်သည်။
လာသမျှ မြို့ရဲ့ အချောအလှ အမိုက်စားလေးတွေ ချည်သက်သက်။
လာပြီးတော့လဲ သူတို့က စက်ချုပ်ဆိုင်တိုက်ခန်းလေးထဲက လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖက် မျက်နှာမူထားသော တန်းလျားရှည်လေးတွင် ထိုင်တတ်ကြ၏ ။
လက်ဖက်ရည်ဆိုင် လူမပြတ်တတ်သလို ၊ စက်ချုပ်ဆိုင်လေးတွင်လဲ ကောင်မလေး လှလှများမပြတ်တတ်။
စနေနေ့ မနက်ဆိုတော့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးကလူပိုစည်၏။
စက်ချုပ်ဆိုင်တွင်လဲ မြို့၏ အချမ်းသာဆုံး ဟု လူအများသတ်မှတ်ထားသော မိသားစုမှ ခပ်လှလှ မာနကြီးကြီး
ကောင်မလေးများ ထိုင်နေကြရင်း စက်ချုပ်ဆိုင် ပိုင်ရှင် အမကြီးနှင့် ထွေရာလေးပါးပြောနေသည်ဟုထင်ရ၏။
ဆောင်း နံနက်၏ လေအေးစီးကြောင်းသည် ကုက္ကိုပင်ကြီးများ ကို ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်နေသည်။
လူတွေက စက်ဘီးများဖြင့် ဈေးဖက်သို့သွားကြသည် ။ တချို့ကလမ်းလျှောက်သွားကြသည်။ တချို့က ဈေးဖက်မှပြန်လာကြသည်။ ကျနော်တို့ မျက်လုံးများကတော့ ပျားကလေးများလို အလုပ်ရှုပ်သူကရှုပ်နေ၏။
ဣထ္ထိယ ကသိုဏ်းဖြင့် သမာဓိရနေသော သူတွေကလဲ စက်ချုပ်ဆိုင်ထဲက ကောင်မလေးများဆီမှအကြည့်မခွာ။
လူအစည်ကားဆုံးသော အချိန် ၏ အစည်ကားဆုံးသောကာလလေး…..။
ဆူညံအော်ဟစ်ဆဲဆိုလာသော စိတ်မနှံ့ သည့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဈေးဖက် မှ ပြေးလာနေသည်ကို ကျနော်တို့ မြင်လိုက်ကြရ၏။
လမ်းပေါ်က စက်ဘီးသမားတို့လမ်းဘေး သို့ ဆင်းနင်းကြသလို တချို့က စက်ဘီးကိုရပ်လိုက်ကြ၏။
လမ်းပေါ်ကလူများလဲ အရူးမ ပြေးလမ်းဘေး ရှောင်ပေးကြ၏။
နောက်ဆုံးအရူးမသည် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးရှေ့သို့ ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာကာ
တခြားစားပွဲမှ အသက်ခပ်လတ်လတ် လူတစ်ယောက်ကို မြင်တော့ ခါးထောက်ရပ်လျှက်
`အော်..ရှင် က ကလေးထိမ်းပါဆိုတာ ဒီမှာလာ အလေလိုက်နေတာကိုးဟင်´
အပြောခံရသောသူ၏ မျက်နှာသည် ဇီးရွက်လောက်သာရှိတော့၏ …။
စက်ချုပ်ဆိုင်ကလေးထဲမှ ကောင်မလေးများကလဲ စပ်စပ်စုစု လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့ကအဖြစ်ကို မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ကြလျှက် ခေါင်းပြူ စပ်စုကြ၏။
`ရှင် ဟာ အချိုးက ညဆို တမျိုး နေ့ဆိုတမျိုး ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ်မယူချင်တဲ့အဖေ´ ဟုပြောကာ
အော်နေသောအသံပိုမြှင့်လာပြီး ရုတ်တရက် ဒါလေးများ ဒါလေးများဆိုသောသီချင်းသံအဆုံးတွင်
သူမ၏ ညစ်ထေး အရောင်ပျောက်နေသော ထမိန်လေးကို ဆတ်ကနဲ ရင်ဘတ်ပေါ်အထိဆွဲလှန်ကာ
သူ့ ဟာသူ လက်နဲ့ တဖြန်းဖြန်းမြည်အောင်ပုတ်ပြရင်း` ရှင့်ကိုဟောဒါ ဘယ်တော့မှမပေးဘူး …
လာတောင်းရင် ဒါပဲရမယ်´ ဟုပြောကာ ကော့ကော့ပြနေတော့၏ ။
ထိုအချိန်တွင် ရည်းစားစာရေးနေသော ဆရာသည် အရာအားလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် မှင်သက်မိနေသည့်
ကာလလေးတွင် အင်မတန်ကျယ်လောင်သော အာမေဋိတ်တခု သူ့ပါးစပ်မှထွက်သွားသည်ကို
သူရည်းစားစာပေးမည့် စက်ချုပ်ဆိုင်ထဲမှ ရပ်ကြည့်နေသော ကောင်မလေးကြားယုံမက ` ဟာ………ငါခုမှ ပဲ သေချာမြင်ဖူးတော့တယ်ဟေ့….´ဆိုသော သူ၏အသံအဆုံးတွင်တော့...အရူးမပင်
ခပ်လှလှစုန်းမတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တယ်..။ ကျနော်ကစုန်းမကို ပြုံးပြလိုက်တယ် ပြုစားခံချင်လွန်းလို့..။
စုန်းမက ဘီကီနီ နက်ပြာရောင်နဲ့ ၀ါဝင်းနေတဲ့ပေါင်သား လှလှတွေကို ဘောင်ခတ်ထားတာယ်..။
ကျနော် က နယ်ကျော်တဲ့ အတွေးတွေနဲ့ ရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တဦး ကမ္ဘာဦးကျောက်ဂူတခုက အရိုးခေါင်းတလုံးတူးဖော်တွေ့ ရှိသလို ခပ်နုနု ယုယုယယလေး တူးဖော်ချင်တယ်… မမြင်ရမှုတခုကို။
စုန်းမဟာ သက်သက်သာသာ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာပေါ့..။
သူ့ ရင်သား နှစ်လုံးကြား .... လှလှလေးအဖွင့်ခံထားရတဲ့ အုန်းစိမ်းသီးထဲ ပလပ်စတစ် ပိုက်ကလေးထိုး
လှလှလေးစုပ်ရင်း နေကာ မျက်မှန်လေးကို ချွတ်လိုက်တယ်…၊
စုန်းမက သူ့ဟာသူပြောတယ်... ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ပူနွေးမှုကြောင့်
ပြင်သစ်ကလာတဲ့ အသားအရေ နုပျိုလှပဆေးတွေဟာ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေကို တချို့နေရာတွေမှာ သတိမေ့သွားစေတယ်လို့..။
စုန်းမဟာ သိပ်လှပလွန်းစွာနဲ့ ကမ်းခြေကို ခြေဖျားလေးထောက် လက်ဖျားလေးတွေကော့လို့ ကြော့ကြော့လေးပြေးတယ် ကျနော့်မျက်လုံးနှစ်လုံးဟာနိမ့်မြင့် ဟန်ချက်တွေနဲ့ မရပ်မနား ထပ်ကြပ်လိုက်သွားဖြစ်တယ်
ဆားငံရေလှိုင်းထဲ သူထိုင်ချလိုက်တဲ့အထိ ...၊တော်ပါသေးရဲ့.. အာရုံထဲဆားငံရေတွေ မစင်ခဲ့လို့..။
စိုရွှဲနေတဲ့ခန္ဓာနဲ့ စုန်းမဟာ တလှမ်းချင်းလှိုင်းကို ရုန်းလို့ ကမ်းပေါ်ကို ပြုံးတက်လာတယ်..။
ရေစိုနက်မှောင်နေတဲ့ ပိတုန်းရောင်ဆံပင်တွေဟာ ရေနစ်သေသွားတဲ့ လကွယ်ညလို...
စုန်းမကြောပြင်မှာ ဇောက်ထိုး ထမ်းပိုးခံလာကြရတယ်..။
ကျနော်ဟာ စုန်းမရဲ့ ပြုစားမှုကို ငံ့လင့်နေရင်း..
ကျနော့်သမာဓိဟာ ရေညှိမတက်တဲ့ ရင်သားနှစ်မြွာကြားမှာ စိစိညက်ညက်ကြေသွားတယ်..။
ပြီးတော့…ကျနော့်ကို လိုလိုလားလား လက်လှမ်းလိုက်တယ်..
ခနနေတော့ စုန်းမက မတ်တပ်ထလိုက်တယ် ကျနော့်ကို သူ့ရင်သားကနေ တင်ပါးအထိ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖက်ထားစေတယ်။ ကျနော်တို့ တယ်လီပသီနဲ့ အဆုံးစွန်အထိ အရှိန်မြှင့်သွားကြတယ်..။
ကျနော်ဟာ သူ့ခန္ဓာလှလှကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်ရင်း သဲစပ်မြက်ခင်းတွေနောက်က ရေချိုးခန်းလှလှအထိ အတူသွားကြတယ် ။
ပြီးတော့ စုန်းမဟာ ကျနော့်ကို ခွာချလိုက်တယ် ...။
လှပတဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မိနစ်ဝက်အတွင်း မိမွေးတိုင်း ဖမွေးတိုင်းဖြစ်သွားချိန်မှာ .....။
ကျနော်ဟာ နံရံကပ် တန်းလေးပေါ်မှာ ခွေပျော့စွာနဲ့.......................။
အသံလှိုင်းတွေကို ပိတ်ပါးနဲ့စစ်
မြွေပျင်းလို လဲ ဒူးမထောက်ဖို့လိုတယ်..။
ကျကျနန သတိထားဖြစ်ဖို့ လဲလိုတယ်..။
အချစ်ဆိုတာ သံကွန်ခြာ ထပ်ထပ်ကာထားတဲ့
တမင်ရွေးချယ် တ၀ဲလည် နှောင်ဖွဲ့ 
အဓိက က ဒါကို
သားရဲ တိရစ္ဆာန် ဘေးအတွက်
ခပ်မူးမူးနဲ့ မြည်းတတ်ဖို့ လဲလိုတယ်..။
ထွေးထုတ်ပစ်တတ်ဖို့ လဲ လိုတယ်..။
တဒင်္ဂ အိုးပုတ်လေးထဲက ဖြစ်စဉ်တခုရဲ့ ဈာပန
ရုန်းရင်းကန်ရင်း လေပြေတွန်းထိုးမှုနဲ့
ဆယ့်ကိုးနှစ် ……. ငယ် ……………
နင့်ပါးပြင်က ရှင်မတောင်သနပ်ခါးနံ့လေးကို….။
ငါ့မြို့လေးက ငါဆန်တက်ခဲ့ ရတာပေါ့။
အသိ လေး တစ နဲ့
ဈာန် နဲ့ကြွ တာ တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့….။
အဖေ က ပြောတယ်ဟာ
ငါတော့… နွေ ပေါင်းများစွာ
မိုးပေါင်းများစွာ စွတ်စိုလို့
လွှတ် ငိုချင်စိတ်တွေနဲ့
မှားရင်းပြင်ရင်းနဲ့ ဘ၀ဟာ
စပါယ်တွေ ဝေတဲ့ နွေည
သရက်ပွင့်တွေ ကြွေတဲ့မိုးဦးညတွေနဲ့
ဇွတ်ပဲ …မလွှတ်ရဲ တဲ့အစွဲတွေနဲ့
နင့်ပါးပြင် ရှင်မတောင်နံ့ သာ ကို လွမ်းတယ်ဟယ်…။
ယုယခြွေ တိုးလျှအသံနဲ့
ငါ့မြို့လေး ဆွေးမြေ့ မသွားခင်
ဒါသင်္ခါရ ကြင်နာသမျှ အနိစ္စမဖြစ်တဲ့
အော် …. ကောင်းကင်ကြီးတောင် ပြုံးလို့ 
ပြီးတော့ တခြုန်းခြုန်းငို ………..။
တနေ့သား... ကျနော်ဟာ ခရီးထွက်ဖို့ ၀ယ်စရာလေးတချို့ရှိလို့
ကုန်တိုက်တွေဆိုတာ ကျနော်သွားခဲတဲ့နေရာတွေပါ။ ကျနော်ဟာ ကုန်တိုက်ထဲမှာ လှည့်ပတ်ကြည့်နေမိရင်း
နည်းနည်းဆာလာတယ်... ဆာလာတော့ ကုန်တိုက်ထဲက စားသောက်တန်းမှာရောင်းတဲ့ တရုတ်ဆိုင်လေးမှာ
ကိုကာကိုလာလေးတစ်ခွက်ဘေးချလို့ ထမင်းကြော်နဲ့ကြက်သားကုန်းဘောင်ကြီးကြော်ဟင်းကို အေးအေးဆေးဆေးစားရင်း
၀တ်ကောင်းစားလှတွေနဲ့ လမ်းသလားနေကြတဲ့ ဖြူဖြူမဲမဲဝါ၀ါ သတ္တ၀ါတွေကို မကြည့်ပဲငေးရင်း ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်ပေါ့။
ကျနော်နာရီဆိုင်လေးကိုရောက်တယ် နာရီလှလှလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်း ကျနော် နာရီလေးတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။
ဘောပင်တွေဖောင်တိန်တွေရောင်းတဲ့ဆိုင်လေးရောက်တော့လဲ ကျနော် ဖောင်တိန်လေးတစ်ချောင်းဝယ်လိုက်တယ်။
တက်ကနိုတီးလုံးတွေဆူညံနေတဲ့ဆိုင်လေး တစ်ဆိုင်အထဲကအပြင်အဆင်ကတော့မှောင်လို့ သားရေအင်္ကျီတွေဝတ်ကြတဲ့
အတွဲတွေတော်တော်များများလက်ချင်းချိတ်လို့ရယ်ပြီးဝင်သွားကြလိုက်ထွက်လာကြလိုက်နဲ့ အထဲမှာ ဘာတွေဆိုတာ သေချာတော့
သိပ်မမြင်ရဘူး ထူးခြားတာက ကလေးတွေနဲ့ မိသားစုတွေ ခပ်ငယ်ငယ် ဆယ်ကျော်သက်တွေ ဆိုင်ထဲမှာမတွေ့ရဘူး
ဒါနဲ့ ကျနော်ကလဲ စပ်စပ်စုစု... ငေးရင်း နဲ့ ငါလဲဝင်ကြည့်ဦးမယ်ဆို ၀င်ကြည့်လိုက်တော့......။
ဆိုင်ထဲမှာ ကြာပွတ်တွေရော လက်ထိပ်တွေရော တော်တော်များများ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ တွေ့ရတယ် ၊ ဖယောင်းတိုင် အရှည်တွေရောပေါ့...
ဒါနဲ့ ကျနော်လဲ တိုးရင်းတိုးရင်းနဲ့ အလှပြမှန်ဘီရိုလေးတွေနား ရောက်သွားတော့ အာရှသူလေးနှစ်ယောက် ကလဲ အဲဒီအလှပြမှန်ဘီရိုကို
ကြည့်ရင်း ပြုံးစိစိနဲ့ ....တဖက် နံရံပေါ်မှာချိတ်ထားတဲ့ ၀တ်စုံတွေကို မော့ငေးနေတဲ့ သူတို့ သူငယ်ချင်းမရဲ့ လက်မောင်းကို လှမ်းဆွဲရင်း ..
ဟိုမိန်းကလေး လှည့်လာတော့ မျက်စပစ်ပြလိုက်တယ် ...ကျနော်ကတော့ အာရှသူလေးတွေဆိုတော့ ငေးမိတာပါ... အဲဒီမှာ တင်
ရုတ်တရက် မျက်စပစ်ပြတာကို ကြည့်လိုက်တဲ့ မိန်းကလေးဟာ မျက်လုံးလေးဝိုင်းသွားပြီး သူမရဲ့လှပနုထွေးတဲ့ နှင်းဆီဖူးနှုတ်ခမ်းလေးတွေဟ လို့
အာမေဋိတ်လေးတခု ကျနော့်နားက ကြားလိုက်တဲ့အထိ ထွက်သွားတယ်.....
မိန့် မိန့် ကြီးချီးကြူးခံနေလိုက်ပုံများ…
အရိပ်ကြီးထိုးလို့ ..ရောင်စုံအလင်းရိပ်ကြီးဖြစ်ရင်းနဲ့လေ…။
ညနေရင်လျားနဲ့ တင်သားတွေတင်းလို့ 
သူ့ ခမျာ ခဏခဏ
မိုးညို့ တဲ့ဆောင်း ညနေမှာ...။
I have to be forgotten
asasand castle
once you crafted on the shore
and now you left me so...
it must be my fate and goal
that you let me explore
to face the tidy waves' strongest throws
It will erase me
as the way you erased me from your memory
although it was notastory...
ဂျပ်ဇ်ဂီတတွေဖြစ်လိုက် ဘလူးစ်တွေဖြစ်လိုက်နဲ့
ငါ့ ရေဒီယိုက ခနခန သံစဉ်တွေပြောင်း ခဲ့...
ငါဟာ လမင်းကြီးကို မထုဆစ်ခဲ့ဘူး
ငါဟာ မင်းကို ကဗျာရှည်တပုဒ်လိုပဲ
မထူးတော့ပါဘူးဆိုတဲ့ အလျော့ပေးမှုနဲ့
သူ့ ကိုယ်သူ ညရေခဲတိုက်ထဲ လှဲချလိုက်ချိန်မှာ
ငါ့အိမ်ကိုငါပြန်ရင် နံရံက ပြုံးပြနေတဲ့
ငါ့စားပွဲလေးပေါ်က ကိုကိုနဲ့တူတူ
ကိုကို့ မွေးနေ့ တိုင်းမှာတူတူရှိနေချင်တယ်
သိပ်ချစ်တယ်ကိုကိုရယ်ဆိုတဲ့ ပို့ စကတ်လေးက
ဒါနဲ့ငါ့ကိုယ်ငါ ငါ့အိတ်ကတ်ထဲ ငါပြန်ထည့်ရင်း
သီချင်းတွေနဲ့ သစ်ရွက်လိုကြွေသွားခဲ့တယ်...
ငါ့ အိပ်ယာလေး ညည အေးစက်တယ်
ငါ့အိမ်ကလေး ညည အဖျားတက်တယ်
မနက်ဆိုလဲ အာရုံမှာ သကြားမပါတဲ့